'Gorrión' waa shaqo kaa dhigaysa inaad ka fikirto oo ay saameyn weyn ku yeelato | Abuurista khadka tooska ah
Haddii aan diiradda saarno wax aan ahayn naxariis darro, waxaan dhihi karnaa sida fikirka aad u karaahiyada ahi matalaadda qaybtan farshaxanka, laakiin haddii aan u nimaadno farriinta ay bixinayso iyo sheekada ay ka hadlayso, waa mid aad u xoog badan oo gebi ahaanba beddeleysa raadka ay ka tagtay.
Waxaan horey u wadaagay sawir weyn waqti aan fogayn taas oo, haddii aan diiradda saareyno faahfaahinta milicsiga indhaha lo'da, waxaan ka heli karnaa dhaleeceynta arxan darradaas ee maanta xayawaanno badan loola dhaqmay. Isla sidaas ayaa laga heli karaa sawirkan oo ah xoolaha la dhaleeceeyo in loo dilo shimbir yar qaabkan naxariis darada ah.
Muran joogto ah ilaa maanta oo ay iskudhacii isbeddelka u gaarka ah ee dhaqanka iyo dhaqankaas taas oo aan ku noqonay mas'uuliyiin iyo milkiileyaal xayawaan kasta oo jiray. Waxaan heli karnaa farriimo dheeri ah sida marinka adduunka midabada iyo farxadda leh ee shimbirtaa, maaddaama nuuradaas midabada leh ay muujinayaan qaansoroobaadyada nolosha oo leh dhammaan codadkeeda.
Shaqo qofka ka dhigta inuu ka fikiro iyo taas, inkasta oo jaleecada hore ay keento diidmo iyo murugo ka dibna waxay nagu hogaamineysaa hilowgaas inaan doonayo inaan duulo Sida sheekada Icarus, waxay inala kulmeysaa xaqiiqo aan ka fogeyn waxa aan nafteenna ku nool nahay. Farshaxanka nuxurkiisu ma ahan mid qurxoon oo aad uga fikiri karto gabbaldhac qurux badan, laakiin mid dib u soo celinaya booskii diidmada iyo qaar ka mid ah runta aan maanta la macaamilayno.
Kahor intaanu bixin, qodob uu ku nuuxnuuxsaday oo uu la mid yahay nolosha had iyo jeer waxay isku dayi doontaa inay horay u socoto xitaa haddii ay xiran tahay oo si dhib yar xitaa u dhaqaaqi karto. Waan kaa tegayaa Calaamadee Instagram, Rinjiraha ku abuuray shaqadan qaabka Trampantojo, farsamo sawireed oo isku dayaysa inuu ku khiyaaneeyo isha isagoo la ciyaaraya jawiga dhismaha, aragtida, hooska iyo saamaynta kale ee indhaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Naxariis darrada iyo dhibaatada ka jirta sawir gacmeedka saliida ee loo yaqaan 'Sparrow'
Tooreega Tutankhamun oo ka yimaada meteorite